महाशिवरात्रीको रात किन सुत्नु हुँदैन ? जानी राखौ, धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ || धर्म संस्कृति
महाशिवरात्रीको रात किन सुत्नु हुँदैन ? जानी राखौ, धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ
काठमाडौं । अधिकांश मानिसहरु शिवरात्रीको दिन भगवान शिवको आराधना गर्छन् तर धेरैलाई यो थाहा नहुनसक्छ त्यसदिन शिवको आराधना किन गरिन्छ ? धेरैको बुझाइ एकै नहुनसक्छ । कोहि भगवान शिवलाई खुशी पारी वरदान लिनका लागि त कोहि अरुले गरेको देखेर पनि गर्छन् । तर यसको मुख्य कारण भने अर्कै छ ।